Football Khabar » शानदार जितसहित रियल शीर्ष स्थानमा : ३९२ दिनपछि हाजार्डको गोल !
शानदार जितसहित रियल शीर्ष स्थानमा : ३९२ दिनपछि हाजार्डको गोल !
प्रमुख खेलाडी इडेन हाजार्डले रियल मड्रिडको जर्सीमा ३९२ दिनपछि गोल गरेको खेलमा स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडले घरेलु लिग ला लिगामा शानदार जित निकालेको छ । शनिबार राति भएको लिगको सातौं खेलमा रियलले हुएस्काविरुद्ध ४–१ को प्रभावशाली जित निकाल्न सफल भयो ।
रियलको टिम ‘बी’को घरेलु रंगशालाा अल्फ्रेडे डे स्टेफानो रंगशालामा भएको खेलमा रियलाई जिताउन ३ जना खेलाडीले गोल गरे । बेल्जियमका स्टार हाजार्डले लामो समयपछि मैदान फर्किएको खेलमै गोल गरेर आफ्नो उत्कृष्ट कमब्याक देखाए । उनले सिजन २०२०–२१ मा पहिलो खेल खेल्दै गोल गरेका हुन् ।
रियलका लागि खेलको ४०औं मिनेटमा हाजार्डले फेडे भाल्भर्डेको पासमा बक्स बाहिरबाट रकेट सटमा दर्शनीय गोल गरेका थिए । उनको शक्तिशाली प्रहार हुएस्काका गोलकिपरले रोक्ने कुनै मौका नै पाएनन् । त्यसपछि खेलको ४५औं मिनेटमा लुकास भासक्वेजको पासमा करिम बेन्जेमाले गोल गरेपछि पहिलो हाफमा रियलले २–० को सहज अग्रता बनायो ।
त्यसपछि दोस्रो हाफमा रियलले २ गोल थपेर आफूले पनि १ गोल खायो । खेलको ५४औं मिनेटमा रियलका लागि फेडे भाल्भर्डेको पासमा बेन्जेमाले गोल गेरर रियललाई सुविधाजनक जिततर्फ अघि बढाएका थिए । तर, खेलको ७४औं मिनेटमा हुएस्काका लागि डेभिड फेरेरियाले क्रस पासमा सुन्दर गोल गरेपछि खेल ३–१ मा आइपुग्यो । त्यसपछि ९०औं मिनेटमा बेन्जेमाले रोड्रिगोको पासमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल थपेपछि रियलले खेल ४–१ ले जित्यो ।
यससँगै रियलले सिजनको पहिलो इएल क्लासिको १–३ ले जितेपछिको अर्को खेलमा ४–१ कै जित निकाल्यो । रियल अब ७ खेलबाट १६ अंक जोडेर अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा चढेको छ । पराजित हुएस्का ५ अंकसहित १८औं स्थानमा छ ।
प्रकाशित मिति १५ कार्तिक २०७७, शनिबार २०:४१